Chemical Nguzogide - Xuzhou Xinqihang Plastic Industry Co., Ltd.
A maara n'ozuzu na ọkpọkọ na akwa akwa na ihe thermoplastic na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ ebe a na-ebufe mmiri na mmiri dị ukwuu na-achọ ihe ndị dị elu na-ewu ihe, na-egosipụta nguzogide corrosion dị mma. Igwe anaghị ata nchara, ntekwasa ígwè, iko na seramiiki ihe nwere ike ịbụ mgbe uru bara uru site thermoplastic ihe, huu nchekwa, ntụkwasị obi na akụ na ụba uru n'okpuru yiri ọrụ ọnọdụ.
Chemical Attack na Thermoplastics & Elastomers
1. Ọzịza nke polymer na-eme mana polymer na-alaghachi n'ọnọdụ ya ma ọ bụrụ na ewepụrụ kemịkal. Otú ọ dị, ọ bụrụ na polima nwere ihe na-agwakọta agwakọta nke nwere ike ịgbanye na mmiri ọgwụ ahụ, enwere ike gbanwee njirimara nke polymer n'ihi iwepụ ihe a na kemịkal n'onwe ya.
2. The isi resin ma ọ bụ polima molekul gbanwere site crosslinking, ọxịdashọn, nnọchi Jeremaya mere ma ọ bụ yinye scission. N'ọnọdụ ndị a, enweghị ike weghachite polymer site na mwepụ nke kemịkal. Ihe atụ nke ụdị ọgụ a na PVC bụ aqua regia na 20 Celsius C na mmiri chlorine mmiri.
Ihe Na-emetụta Nguzogide Chemical
Ọtụtụ ihe nwere ike imetụta ọnụọgụ na ụdị mwakpo kemịkal nwere ike ime. Ndị a bụ:
• itinye uche: Na mkpokọta, ọnụọgụ ọgụ na-abawanye site na itinye uche, mana n'ọtụtụ ọnọdụ enwere ọnụ ụzọ dị n'okpuru nke enweghị mmetụta ọgwụ kemịkalụ dị egwu ga-ahụ.
• Okpomọkụ:Dị ka usoro niile, ọnụọgụ ọgụ na-abawanye ka ọnọdụ okpomọkụ na-arị elu. Ozo, uzo ikuku nwere ike idi.
• Oge Kpọtụrụ: N'ọtụtụ ọnọdụ ọnụego ọgụ na-adịghị nwayọ ma na ọ dị mkpa naanị site na ịkpọtụrụ nkwado.
• Nchegbu: Polyfọdụ ndị polymer nọ na nrụgide nwere ike ị nweta oke ọgụ. N'ozuzu PVC a na-ahụta ihe na-enweghị mmetụta na "nrụgide nrụgide".
Ozi Mgbagha Chemical